आलस्य महसुस गर्नुहुन्छ ? यी योगासन गर्नुहोस् - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ योग ∕ आलस्य महसुस गर्नुहुन्छ ? यी योगासन गर्नुहोस्
आलस्य महसुस गर्नुहुन्छ ? यी योगासन गर्नुहोस्
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७८ चैत्र २ गते, ०५:२७ मा प्रकाशित
दिनभरको दौडधुप र कामको चापले शरीरमा थकान महसुस हुनु सामान्य कुरा हो । तर, सधै थकान र कमजोरी महसुस हुने समस्या भएमा यसलाई रोगको लक्षण मानिन्छ ।
स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार खराब जीवनशैली जस्तै:- धुम्रपान, खराब खानपान, निन्द्रा वा व्यायामको कमी, मुटुरोग, मधुमेह वा थाइराइडजस्ता रोगले पनि मानिसमा थकान ल्याउन सक्छ । यही कारणले गर्दा समयमै थकानको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन आवश्यक छ।